WAR CUSUB: Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo lagu wado in ay is arkaan, waa halkee? | HalQaran.com
WAR CUSUB: Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo lagu wado in ay is arkaan, waa halkee?
Bixid, Madaxweyne Farmaajo iyo dhiggiisa dalka Kenya, Uhuru Kenyatta /Sawir Hore/Keydka Halqaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweyneyaasha dalalka Soomaaliya iyo Kenya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) iyo Uhuru Kenyatta ayaa waxaa toddobaadka soo socdo la fillayaa in ay isu arkaan Magaalada Sochi ee dalka Ruushka.
Labada Madaxweyne ayaa waxay casuumaad ka helayn dhigooda Ruushka, Vladimir Putin, waxaana lagu wadaa in Magaalada Sochi kaga qaybgalaan shirka 1aad, ee ay yeelanayan Madaxweyneyaasha Ruushka iyo kuwa Afrika.
Xukuumadda Moscow ayaa waxay shirkan ku soo casuumtay in ka badan konton hoggaamiyeyaal reer Afrika ah.
Muddooyinkii ugu dambeeyay xiriirka Madaxda Soomaliya iyo Kenya ayaa ahaa mid aan wanaagsanayn, kadib markii habdhaqanka guracan ee Kenya uu ka careysiiyay Madaxda Qaranka Soomaaliyeed.
isku arkaya dalka Rushka